पशुपति शर्माको ‘दुन्दुभी’ - पशुपति शर्माको ‘दुन्दुभी’
२०७५, १२ फाल्गुन, 01:29:12 PM
कुनै पनि सत्यको सँघर्षअघि दुन्दुभी बज्ने गर्छ । गायक पशुपति शर्माले दुन्दुभी फुकीसकेका छन् । अब जन संघर्षको ‘गान्डीव’ उठन मात्र बाँकी हो । शासकहरुले प्रतिक्षा गरदा हुन्छ ।
हो, ‘पशुपति शर्मा’ प्रकरणबाट एउटा सुखद सँकेत मिलेको छ । एउटा गायकको गितसँग आज तर्सिने शासकहरुको लुटको साम्राज्यविरुद्ध भोलीका दिनमा जब योभन्दा चर्का विरोध, विद्रोह र सँघर्ष प्रारम्भ हुनेछन्, त्यसबेला यीनले क–कसका युटूब बन्द गराउलान् ? एउटा गीतबाट थुरथुर हुने कायरहरुले भोलीका दिनमा जनस्तरबाट भडकिनसक्ने शसक्त विरोधको प्रतिकार कसरी गर्लान् ? युवा सँघको धाकधम्कीवाला विज्ञप्तिले त त्यसलाई पक्कै थेग्न नसक्ला ।
पशुपति शर्मा सुरुवात पनि हुनसक्छ, जसले शासकहरुको नाडी छाम्यो । शासकहरु कति लघुताभासले ग्रस्त रहेछन् भन्ने बुझ्न सकियो । अब राजनीतिक मिसनकै तहत यस्ता अभियानहरु धमाधाम सुरु नहोलान् भन्न सकिन्न ।
पशुपति शर्मा सायद दुइ तिहाईको भय र आतंक सामु डराए । कम्युनिष्टहरुले विरोधीमाथि भौतिक आक्रमणसमेत गर्नसक्ने बिगत देखीसकेकाले उनले यो लफडामा नफँसी आफुलाई सुरक्षित बनाए । उनको त कुनै राजनीतिक मिसन थिएन ।
तर, के सबै पशुपति शर्माजस्ता धाकधम्कीबाट डराउने होलान् त ? के भ्रष्टाचार र लुटलाई सबैले सहेरै बसीरहलान् त ? के लुटको यथार्थ, जुन गीतबाट अभिव्यक्त भयो, त्यो सुनेका जनता युवा सँघको धाकधम्कीबाट सँधै डराइरहलान् त ?
भोली राजनीतिक मिसनकै तहत कुनै निडर कलाकार निस्कीनसक्छ । उसले झन् झन कडा गीत गाउन थाल्यो भने शासकहरु के गर्लान् ? हदै भए तिनले ति कलाकारलाई थुन्लान् ? थुने भने के होला ? हिजो कृष्णसेन इच्छुकलाई शाही शासकहरुले थुनेकै हुन्, मारेकै हुन् ।
त्यसपछि के भयो त ? शाही शासन ढल्यो नी हैन र ? जन विरोधका जायज स्वरलाई दबाउन आजसम्म कुन चाहिँ माइकलालले सकेको छ ?
कान्तिपुर दैनिकमा ‘हत्यारो ज्ञानेन्द्र गुट’ भनेर लेख्ने डा. बाबुराम भट्टराई र त्यस्तो लेख छाप्नसक्ने साहसी सम्पादक युवराज घिमिरेलाई सोधौं न, विरोधको स्वर कुन हदसम्म कडा हुनसक्छ भनेर ।
दरबारमा विराजमान राष्ट्रप्रमुख तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘मुर्ती चोर’ अनि युवराज पारसलाई ‘गुण्डा’सम्मका शब्दहरु उरालेर अपमान गर्नेहरु पनि हाल नेकपाका युवा नै थिए । राष्ट्रिय सभामा तात्कालीन एमालेका साँसद गोल्छे सार्कीले काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि हातपात गर्दा एमालेका कार्यकर्ताले थपडी बजाएकै हुन् ।
जागरण पछि आन्तरिक अन्तरक्रियामा कांग्रेस
विकासका मुद्दामा कांग्रेससँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था : प्रचण्ड
कांग्रेसको असहमतिका बीच अर्थ विधेयक बहुमतले पारित
कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको भन्दै कांग्रेसद्वारा ध्यानाकर्षण